Babisma - Wikipedia
Fasan'ny Bab ao amin'ny Tendrombohitra Karmela (Haifa any Israely).
Ny babisma na finoana baby dia fihetseketsehana ara-pivavahana mpitondra fanitsiana sy milenarista naorin' ny mpivarotra iray atao hoe Sayyid ʿAlī Muḥammad Šīrāzī (1819-1850), izay nomena ny anarana hoe Bāb (teny arabo باب midika hoe "varavarana"), tao amin' ny tanànan' i Shiraz ao Iràna tamin' ny 23 Mey 1844. Amin' ny teny persàna dia atao hoe: بابی ها / Bābī hā) io fivavanana io.
Firehana ara-pivavahana nipoitra avy amin' ny sampana siita, izay manao fampianarana mifanohitra amin' ny finoana silamo be mpanaraka ny babisma satria, amin' ny fanambaran' ny Bāb, dia fisehoan' Andriamanitra avokoa ny mpaminany rehetra ary izy tenany dia mitovy amin' i Mohamady. Faniratsirana ny finoana silamo izany amin' ny Miozolmana satria amin' izy ireo dia mpaminany farany sady lehibe indrindra i Mohamady.
Ity fihetsiketsehana mesianika ity dia niteraka fiovana be tao amin' ny fiarahamonina persana tamin' ny taonjato faha-19. Ny babisma dia niely haingana tao Persia, ka nahatratra ny saranga ambany amin' ny vahoaka, hatramin' ny tantsaha farany tsotra ka hatramin' ny manam-pahaizana ambony. Ny mpitondra fivavahana siita niaraka amin' ny governemanta persana dia nanenjika amin-kabibiana ny mpanaraka ny finoana baby an' arivony maro. Tsy misy afa-tsy mpianatra vitsivitsy ankehitriny sisa amin' ny mpianatr' i Bāb, izay miantso ny tenan' izy ireo hoe "Vahoakan' i Bayān" sady atao hoe Bābī, Bayānī na Azalī. Ao Iràna sy ao Ozbekistàna no tena ahitana azy ireo nefa sarotra ny mahalala ny tena isany, satria manafina ny tena fivavahany izy ireo sady tsy misy fiavahany amin' ny an' ny Miozolmàna maodidina azy ny fiainany.
I Bāb[hanova | hanova ny fango]
Tamin' ny fiantombohan' ireo taona 1790 tao Iràna dia teraka ny fikambanana siita notarihin' i Šayḫ Aḥmad Aḥsāʾī. Tamin' ny nahafatesan' i Sayyid Kāẓim, mpandimby an' i Šayḫ Aḥmad tamin' ny fitantanana ny sekoly, dia lasa nitady mpampianatra hafa ny sasany tamin' ny mpianany mba hitantana ny fikambanana. Niainga ho any Shiraz ny iray amin' ireo mpianatra ireo, dia i Mullā Ḥusayn. Nitondra ny anaram-boninahitra hoe Bāb (باب ), izay midika hoe "varavarana" izy (izany hoe varavarana idirana mankany amin' ny fahamarinana), ary notifirin' ny manampahefana tao Iràna ka maty, araka ny faneren' ireo mpitondra fivavahana siita, enin-taona taty aoriana tao Tabriz.
I Mullā Ḥusayn no mpianatry ny Bāb voalohany. Tao anaty fotoana fohy dia niampy fito ambin' ny folo izany. Teraka tamin' izany fotoana izany ny babisma. Ireo mpianatra valo ambin' ny folo volohany ireo no fantatra hatramin' izay. Isan' ny mpianatry ny Bāb i Bahāʾ-Allāh mpanorina ny finoana bahay.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Babisma&oldid=1040251"
Voaova farany tamin'ny 23 Novambra 2021 amin'ny 19:19 ity pejy ity.